विदेशबाट फर्केको लागि सरकारले दिने भयो सुरुवाती पैसा भिडियोसहित
सरकारले वैदे’शिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरु’लाई सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने भएको छ । शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद’को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै विदेशमा रोजगारी गरेर फर्केका दक्ष युवाह’रुलाई नेपालमै उद्यमशील बनाउन सुरु’आती पुँजी उपलब्ध गराउने बताएकी हुन् ।
विदेशबाट फर्किएर ने’पालमै केही गर्न चाहने युवाह’रुलाई सरकारले यस्तो सुविधा दिने बताएको हो । उद्यम’शील बन्न चाहाने युवाहरु’लाई सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराईने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख रहेको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले वेरो’जगारीको संख्या बढ्ने सम्भाव’ना देखिएकोले युवाहरुलाई कृषि क्षेत्रमा अघि बढाण्ने सरकारको नीति रहेको बताइन् । – धनकुटा खबर
हेर्नुहोस् सम्पूर्ण जानकारीको लागि भिडियो… भिडियो हेरिसकेपछी कस्तो लाग्छ ? यो समाचार पढेर कस्तो लाग्यो ? आफ्नो कुनै पनि सल्लाह सुझाव या प्रतिक्रिया भए हामिलाई हाम्रो साथिखबर पेज मा गएर मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ । यो समाचार पढेर सबैको जान्कारी को लागि एक एक शेयर गर्नुहोला । हेर्नुहोस यो भिडियो ।